Any Santiago de Chile, manintona ny mpizahatany rehetra. Eto, ny trano fandraisam-bahiny mahatalanjona, ny hatsaran-tarehy voajanahary tsy mahazatra, ny tsangambato maro, mozika tsy manam-paharoa ary ny maro hafa ho an'ny mpandeha.
Na izany aza, ny renivohitra Chili dia heverina ho iray amin'ireo mahaliana sy tsy mahazatra indrindra amin'ireo tanàna lehibe eto amin'izao tontolo izao. Ary noho izany dia tsy mahagaga raha mitady hiditra eto ireo mpizaha tany manerantany.
Azo antoka ny filazàna fa ny tena mahasarika an'i Santiago, Chile - fahantrana tsy manam-paharoa sy tsy manam-paharoa izay mameno ny tanàna amin'ny atmosfera manokana.
Ny kianja lehibe ao an-drenivohitra dia Plaza de Armas - ny faritry ny fitaovam-piadiana, nomanina hatramin'ny fotoana nanorenana ilay tanàna. Manodidina azy io, toy ny fomba nentim-paharazana tamin'ny nananganana tanàna nataon'ireo mpanjanaka Espaniola, ireto tranobe manaraka ireto dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy Baroque:
Ny lehibe indrindra ao amin'ny katedralin'i Chile, natsangana tamin'ny taona 1541 hatramin'ny 1619;
Trano fivoriana , naorina tamin'ny taonjato faha-18;
Ny Tranon'ny Governora , izay niorenan'ny mpanorina an'i Santiago, Pedro de Valdivia;
Tranom-bakoky ny tantaram-pirenena - tany aloha ity trano ity ny Royal Audience ;
La Moneda - lapam-panjakana, natsangana tamin'ny 1780 ka hatramin'ny 1805 taona. Tany am-piandohana dia trano fanorenana, ary tatỳ aoriana dia notendrena ho an'ny filoham-pirenen'ny firenena izany.
Ao amin'ny kianja ihany koa dia misy tsangambato ho an'ny mpanorina an'i Santiago P. de Valdivi I - nanokatra izany tamin'ny taona 1960.
Ny araben'ny renivohitra Chili dia Alameda, izay midika hoe Alley of Poplars. Manana anarana hafa koa izy - ho fanomezam-boninahitra an'ilay mpiady ho an'ny fahaleovantenan'ny tany latina Amerikana avy amin'ny mpanjanaka Espaniola Bernardo O'Higgins.
Amin'ny ankapobeny dia marobe ny arakaraky ny ariary - raha ny ankabeazan'ny kianja no manjakazaka amin'ny endriky ny barock, dia any amin'ny faritra hafa ao an-tanàna dia misy trano naorina araka ny endriny neo-gothic, maoderina sy amin'ny lalana hafa. Mazava ho azy fa misy koa trano maoderina natsangana tamin'ny metaly, bika sy vera.
Ny famaritana an'i Santiago, ireo toeran-tsarin'ity tanàna ity, amin'ny toerana mahaliana sy trano sasany, dia hitoetra amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
1. Basilica an'ny Virjina Mercedes . Ity trano ity dia miorina eo akaikin'ny kianjan'ny renivohitra. Ny basilika dia an'ny Fiangonana Katôlika - natsangana tamin'ny taonjato faha-16 izy ary eo amin'ny lisitr'ireo andrim-panjakana nasionaly ao amin'ny firenena. Ny basilika dia arivoarivo tsara tarehy, voaravaka amin'ny loko marevaka mena sy mavo.
Tany am-boalohany dia natsangana ny basilika tamin'ny taona 1566, saingy horohoron-tany no nanimba izany - naka im-betsaka imbetsaka ilay trano - tamin'ny 1683 sy 1736. Na izany aza - ity, indrisy, dia fanao mahazatra ho an'ny Shiliana, satria matetika ny firenena dia iharan'ny horohoron-tany manimba. Ny farany tamin'ny lehibe indrindra dia nitranga tamin'ny Febroary 2010.
2. Fiangonan'i San Vicente Ferrer . Fiorenam-pivavahana hafa mahavariana dia ao amin'ny zaridainan'i Los Dominicanos, izay nahazo ny anarany ho fanomezam-boninahitra ny baikon'ny katolika.
Ny fanorenana ny fiangonana dia vita tamin'ny taona 1849, saingy 28 taona monja dia nisy lakolosy nanorina - ny tilikambom-patana dia niorina tamin'ny iray amin'ireo tilikambo roa.
Nolavina tamin'ny horohorontany tamin'ny taona 1997 ny fiangonana ary na dia eo aza ny fisian'ny asa famerenana amin'ny laoniny dia alefa any am-piangonana ny serivisy.
3. Ny Fiangonan'i Santo Domingo . Ny Fiangonana Dominikanina dia naorina tamin'ny taona 1747. Ambony ny fananganana rafitra tokana, miaraka amin'ireo biriky tsara tarehy indrindra, ilay mpanao mari-trano malaza, de los Santos, dia niasa tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny 1951, dia fantatry ny Papa Domingo ho tsangambato nasionalin'ny firenena.
4. Ny fanorenana ny raharaham-bahiny any Chili . Voasarika ihany koa ny biraon'ny Raharaham-bahiny, nanangana maherin'ny 200 taona lasa izay - tamin'ny taona 1812.
Ankoatr'izany, misy rafi-pitantanana manan-danja hafa amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny Central Tank of Chile, ny fananganana ny Minisiteran'ny Finansan'i Chili sy ny hafa.
5. Trano mena (Casa Colorada) . Araka ny efa voalaza etsy ambony, dia misy trano mahaliana maro ao Santiago, naorina taonjato maro lasa izay, saingy ny ankamaroan'izy ireo dia naverina tamin'ny laoniny sy navaozina taorian'ny 1900.
Na dia izany aza, anisan'izany ny tsara tarehy dia ny Trano mena - natsangana tamin'ny taona 1779, nitazona tanteraka ny endriny tany am-piandohana, izay niaritra horohoron-tany izay nanozongozona ny renivohitr'i Chile.
6. Ny Kianja Nasionaly . Ny kianja lehibe indrindra eto amin'ny firenena - androany dia mandray mpijery 63500, na dia mihoatra ny 85 arivo aza ny mpanatrika. Natomboka tamin'ny 1962, raha nisy banky tao amin'ny kianja - taorian'ny nanorenana sy fametrahana seza tsirairay dia nihena ny fahaiza-manaon'ny kianja. Androany dia kianja fanaovana fanatanjahan-tena tanteraka ny kianja, ka ankoatra ny kianja baolina kitra dia misy dobo filomanosana, kianja ary efamira mihidy.
Nosokafana tamin'ny 1939 ny Kianja Nasionaly ary nidina teo amin'ny tantara, avy amin'ny tsara sy ny lafiny ratsy.
Izany no nahatonga ny lalao tamin'ny World Championship tamin'ny 1962. Amin'ny ankapobeny, ankoatra ny fivoriana hafa, ny lalao farany sy ny lalao ho an'ny fahatelo dia natao teo amin'ny sehatry ny kianja, izay nandrombaka ny ekipa Shiliana ary nahatratra ny vokatra tsara indrindra teo amin'ny tantara, ka nahazo ny medaly varahina tamin'ny fiadiana ny tompondaka eran-tany.
Na izany aza, tamin'ny 1973, taorian'ny fanonganan'i Pinochet, lasibatry ny toby fitanana ny kianja, izay nahitana gadra maherin'ny 40.000 no notanana.
Mahaliana anao ny mahita any Santiago, Chile? Aza hadinoina ny mihaino tsy amin'ny toetran'ny natiora.
Anisan'ireny ny tendrombohitr'i San Cristobal - misy fiara fitateram-bahoaka. Avy any an-tendrombohitra manolotra fijery mahatalanjona ny tanàna. Ao amin'ny tendrombohitra ihany koa dia misy toerana mahaliana - bot, trano fisakafoanana, zoo iray. Any an-tendrombohitra dia misy sarivongan'i Maria Virjiny (36 metatra ambony), izay toa mihantona eo ambonin'ny tanàna ary miaro azy.
Mariho fa misy kianja be dia be ao Santiago , izay tsy mahagaga raha misy tanàna lehibe toy izany. Ny lehibe indrindra, izay manodidina ny 800 hektara eo ho eo, dia ny Metropolitano Park - izay ahitana hetsika ara-kolontsaina sy ara-panatanjahan-tena, izay ny ankamaroany dia afaka. Ary satria Metropolitano no iray amin'ireo toerana tian'ny olona indrindra ho an'ny mponina sy ny mpitsidika ao an-drenivohitra Chile.
Eo amin'ny vala hafa ao amin'ny tanàna dia mendrika ny hanonona:
Ny vala lehibe indrindra amin'ny tanànan'i Araucana, noforonina tamin'ny taonjato faha-17;
Ny valanjavaboary botanika , ao amin'ny faritaniny ahitana hazo karazana fitopolo;
Fahaizana momba ny kolontsaina
Maro ireo tranombakoka ao Santiago. Iray amin'ireo mahaliana indrindra ny Museum of Pre-Columbian Art , izay nanokatra ny varavarany tamin'ny 1981. Manolotra karazana karazana tranainy maro izy io, zavatra tsy fahita firy tamin'ny vanim-potoana talohan'ny Koloniana tany amin'ny tany Siliana. Amin'ny ankapobeny, ny fampiratiana amin'ny tranombakoka dia mandrakitra mandritra ny 10 000 taona!
Ny tranombakoka momba ny zavakanto maoderina , nisokatra tamin'ny taona 1949, dia mahafinaritra ihany koa ho an'ny mpizaha tany. Ao amin'ny fampirantiany, asa maro isan-karazany, nanomboka tamin'ny tapaky ny taonjato faha-19 ka hatramin'ny famoronana maoderina. Ary tsy ireo mpanao sary sokitra, mpanakanto, fa vahiny ihany koa. Ny fampiratiana ireo mpamorona miasa ato amin'ity tetikasa ity dia mitazona eto.
Ny mahaliana dia ny National Museum of Fine Arts , izay ahitana ny fanangonana tsy misy sary sy sary sokitra.
Ny kognita dia fitsidihana ny Tranom-bakoka Nasionaly , misokatra hatramin'ny faran'ny taona 1830, izay ahafahanao mahafantatra tsara ny tantaran'i Shily sy ny kontinanta amerikana manontolo.
Ho an'ireo mpitsidika ara-kolontsaina ao Santiago, na dia tantara malahelo aza, dia ilaina ny milaza fa Villa Grimaldi - eto no nanangona ny vahoaka kreôla nandritra ny taonjato faha-20.
Tao amin'ny faritry ny trano dia nisy sekoly iray, teatra. Taorian'ny nahatongavan'i Pinochet teo amin'ny fitondrana, tamin'ny taona 70 tamin'ny taon-jato farany teo, dia nifototra tamin'ny trano ny miaramila. Taorian'ny fianjeran'ny didy jadona feno ra dia fantatsika ny zava-nitranga tao amin'ny faritry ny toerana famoronana indray mandeha. Amin'izao fotoana izao dia fahatsiarovana manoloana ny vanim-potoana sarotra sy mampalahelo teo amin'ny tantaran'ny firenena.
Ary ity dia tsy lisitra feno ny fanatanjahanten'ity renivohitra mahafinaritra ity - raha manana ny fahafahana ianao, ataovy azo antoka fa mankany amin'ny tanàna mahafatifaty Amerikana mahafinaritra indrindra mba hahafantaranao azy manokana.
Ho tonga any Santiago ianao dia tsy maintsy manao ny sidina transatlantika. Indrisy, tsy misy fiaramanidina mivantana avy any Moskoa - ilaina ny manao transplant roa na telo.
Ny dia manontolo dia afaka 20 ora farafahakeliny. Ny vidin'ny sidina dia miankina amin'ny fiaramanidina sy ny làlana nofidiana. Mba hamonjena ny vola, andramo ny hevi-dehibe isan-karazany amin'ny sidina. Ny vidin'ny tapakila iray dia mety tsy miovaova arakaraka ny toeran'ny seranam-piaramanidina nomanina hatao.
Arivon'i La Portada
Fasan'ny Grutas del Palacio
Hazo misy ranomandry - endri-tsoratry ny teknolojia vaovao ao an-tanimbary
Vehivavy mitafy fanatanjahan-tena
Ny fanehoana hazo fihinam-boa no fomba tsara indrindra
Ny gymnastique Tibetana ho an'ny fahavoazana
Ny voan'ny pine amin'ny fanafody ny folk
Fehezam-boninkazo 12 malaza izay very ny tsara
Ahoana no hampitombo ny isan'ny ronono?
Blaogera - toetra mahasoa sy fanoherana
Mitsangàna amin'ny kiraro
Kuperoz amin'ny tarehy - ny antony sy ny fitsaboana
Vehivavy miloko mavo
Vary amin'ny vina
Ahoana ny fomba fitsaboana staphylococcus aureus?